Musi waApril 23, WineHQ yakakanda v6.7 yesoftware yayo yekumhanyisa Windows zvinoshandiswa pane mamwe masisitimu anoshanda seLinux. Kuve vanochengeta nguva, izvo zvaireva kuti nhasi May 7 aifanira kusvika WAINI 6.8, uye ndizvo zvazviri apfuura nguva dzakapfuura, nguva yapfuura kupfuura zvakajairwa. Mushure mekugadzikana shanduro yakaburitswa Pakutanga kwegore, chirongwa ichi chinoburitsa dzinosvika makumi maviri shanduro dzekuvandudza senge isati yatanga neKuburitsa Vanokwikwidza uye, pakupedzisira, yakagadzikana WINE 20.
Ino nguva, WineHQ yakagadzirisa 35 bugs, asi yaita huwandu hwayo 359 kuchinja. Kana iri rondedzero yezvinhu zvinozivikanwa zvikuru, timu yevanogadzira yakangotaura zvitatu, saka haisi imwe yeanoburitsa anotyisa enguva pfupi yadarika, chero bedzi usinga fungisisa mazana ezvisikana zvidiki zvakaitwa. zvaitwa. Kunyangwe chiri chokwadi kuti zvinofanirwa kutarisirwa muchikamu chino chebudiriro.
WINE 6.8 inosimbisa
Raibhurari yakaiswa mune yekuvakira-yakatarwa subdirectories.
Secur32 raibhurari yakashandurwa kuita PE.
Vashandisi vanofarira izvozvi vanogona kuisa WINE 6.8 kubva kune yayo kodhi kodhi, inowanikwa mukati izvi y iyi imwe link, kana kubva pamabhinari anogona kutorwa pasi kubva ku pano. Mune iyi link kubva kwatinga dhawunirodha mabhinari pane zvakare ruzivo rwekuwedzera iyo yepamutemo chirongwa repositi kuti ugamuchire izvi uye nezvimwe zvichavandudzwa mune ramangwana pavanongogadzirira masystem senge Ubuntu / Debian kana Fedora, asi kune zvekare mavhezheni e Android uye macOS.
Iyo inotevera yekuvandudza vhezheni ichave WINE 6.9, uye ichazosvika zvechokwadi Chishanu chinotevera, Chivabvu 21. Pakati pezvauchasuma, uchifunga kuti isu tichiri mune yekutanga vhezheni dzekuvandudza, chinhu chete chatinogona kukuvimbisa ndechekuti ichauya nemazana ediki ekuvandudza uye kugadzirisa sekugara.